फिल्म ईन्स्टिच्युटको अध्यक्षमा दीपाश्री नियुक्त | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
पछिल्लो समय फिल्म एकेडेमीहरुको मोफसलमा पनि माग बढ्दो छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश १ को केन्द्रको रुपमा रहेको इटहरीमा ‘पुर्वान्चल ईन्स्टिच्युट अफ फिल्म एन्ड टेलिभिजन’ संचालनमा छ। भर्खरै संचालनमा आएको उक्त फिल्म एकेडेमीले यतिबेला अभिभावक पाएको छ।
अर्थात ईन्स्टिच्युटको अध्यक्षको रुपमा लोकप्रिय अभिनेत्री, निर्मात्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौला नियुक्त भएकी छिन्न। असोज ४ गते इटहरीस्थित ईन्स्टिच्युटकै सभाहलमा भएको एक कार्यक्रमका बिच निरौलालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो।
यस्तै सोहि कार्यक्रम मार्फत चलचित्र बिकास बोर्डका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार राईलाई ईन्स्टिच्युटको संरक्षकको रुपमा नियुक्त गरिएको जानकारी गराईएको छ। यस्तै ईन्स्टिच्युटको सल्लाहकार समिती पनि सोही कार्यक्रमबाट तय गरिएको छ। वरिष्ठ सल्लाहकारमा निर्देशक तथा चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानलाई चयन गरिएको छ।
यस्तै महासंघ महासचिव तथा अभिनेता दिनेश कोइराला र महासंघ उपाध्यक्ष प्रकाश सुब्बालाई पनि सल्लाहकार समितिमा चयन गरिएको छ। कार्यक्रममा आफ्नै ठाँउमा यसरी अध्यक्ष जस्तो पदमा बस्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको निरौलाले बताइन्।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा रहेका फिल्म निर्माता तथा अभिनेता दिपक राज गिरिले पनि कलेज तथा दिपालाई बधाई दिए। उनले कार्यक्रममा बोल्दै पहिले आफुहरुले परेर सिकेको तर, अहिले पढेर सिक्न सकेमात्रै प्रतिष्पर्धी बजारमा उत्रीन सकिने बताए।
ईन्स्टिच्युटले अहिले विभिन्न सर्ट मुभीहरु पनि निर्माण गरिरहेको छ। जस्ले गर्दा त्यहा पढ्ने विद्यार्थीहरुले अवसरको अनुभव र आफ्नो कलालाई पोख्ने मौका पाईरहेका छन्। नृत्यको कक्षा समेत संचालन गरिरहेको ‘पुर्वान्चल ईन्स्टिच्युट अफ फिल्म एन्ड टेलिभिजनमा’ फिल्म मेकिङ संगै डिरेक्सन, स्कृप्ट राईटिङ, सिनेमाटोग्राफी, अभिनय, एडिटिङ लगायतका कोर्षहरु पनि गराईरहेको संचालक रोनिश राउतले बताए।
Previous articleमहानायिका चै को ?
Next articleप्रीयंकाले जन्माईन् छोरी